चितवनको कभर्ड हलको बिजोग कहिलेसम्म ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० भाद्र १०, सोमबार ०४:५० गते
चितवनको रत्ननगरमा रंगशाला बनाउनका लागि लगातार तीन वर्षसम्म सरकारले चार करोड रूपैयाँ दियो । चितवनका विकासप्रेमी भनिएका कोही, कसैले त्यो कामको सुरूवातसमेत गर्न नसक्दा त्यो बजेट फ्रिज भएर गयो । त्यो विषयमा न जिल्लावासीले खोजी गरे, न कसैको चासोमा प¥यो । कसैले काम गर भनेर दिएको रकमको समेत सदुपयोग गर्न नसक्ने चितवनवासी आफ्नै रकमको समेत सदुपयोग गर्न नसक्नेको कित्तामा परेका छन् ।
हुन त, यहाँ कसका बारेमा के भनेर के नै हुन्छ र ? अनि कसका कुरा सुन्ने कसलाई पो फुर्सद छ र ? तर, म फेरि पनि आज चितवनवासीका नाममा भएको एउटा लुटको विषय उठान गर्दैछु । चितवनवासी नागरिकको रगत र पसिनामाथि खुलेआम रुपमा लुट भइरहेको अवस्थामा यहाँका नागरिक समाज अनि न्यायप्रेमी भन्नेहरुको मुखमा किन बुझो लागेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
जिल्लामा विकास निर्माणका लागि पहल नभएका होइनन् । काम नभएको पनि होइन, तर लुटमा रमाउनेहरुले सबै विकास निर्माणका काममा ब्रम्हलुट मचाए । कोही बोलेनन् र बोल्ने छाँटकाँट पनि निकाल्दैनन् । चितवनका हरेक नागरिकसँग कुनै न कुनै बहानामा रकम संकलन गरेर लाखौँ रूपैयाँ जम्मा गरेर काम सुरू गरी बीचैमा अपूरो बनाएर लुटेर खानेहरु आज कहाँ पुगेका छन् र के गर्दैछन्, कसैको चासोमा परेको छैन । अब खोजी हुन्छ या हुन्न, खोजीको विषय बनेको छ ।
कुरा हो, चितवनमा बन्न सुरू गरेर अलपत्र परेको कभर्ड हलको बिषय । एक करोड ३५ लाखको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको जिल्लाको भरतपुरस्थित कभर्ड हल आज बेवारिसे बनेको छ । अनियमितताको चरम सीमा नाघेका कारण त्यो कभर्ड हलले पूर्ण रुप पाउन सकेन, जुन हाल आज चितवनवासी सबैलाई गिज्याइरहेको छ । २०५९ साल मंसिर २८ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सदस्य ऋषिबाबु परियारले शिलान्यास गरी काम सुरू गरिएको भवनको ६० प्रतिशत काम सकिएपछि भ्रष्टाचारकै कारण अलपत्र परेर बसेको छ ।
भवन निर्माणका लागि जिल्लावासीसँग विभिन्न बहानामा एक करोड २१ लाख रूपैयाँसम्म संकलन गरिएको भनिएको थियो । तर, कभर्ड हलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार एक करोड सात लाख रूपैयाँमात्र संकलन भएको देखाइएको छ, बीचको रकम कहाँ कसले कसरी खायो भन्ने विषयमा कोही कसैले खोज्ने आँटसम्म पनि गरेनन् । भरतपुर नगरपालिकामार्फत गोलमाल भएको १२ लाख १० हजार ९ सय ६० रूपैयाँको हिसाब आज यति धेरै समय बितिसक्दासम्म कोही कसैले खोज्ने आँट गरेनन् ।
हल निर्माणका लागि संकलन गरिएको रकम कुनै दातृ निकाय वा सरकारको थिएन । त्यो त केवल जिल्लाका नागरिकहरुसँग विभिन्न बहानामा संकलन गरिएको थियो । बाध्यतामा परेर नागरिकहरुसँग संकलन गरिएको रकममाथि चरम दुरूपयोग भएको वर्षै बितिसक्दा पनि अझै पनि जिल्लाका कोही नागरिक र कुनै निकायको त्यसतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन । कभर्ड हल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी फारम लिँदा एक सय रूपैयाँ र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गर्न राजीनामा फारम लिँदा नेपाल लेखापढी व्यवसायी संघमार्फत तीस रूपैयाँ सर्वसाधारणसँग अनिवार्य रुपमा असुल्ने गरिएको थियो । त्यतिमात्र नभई नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुसँग पाँच सय रूपैयाँको दरले उठाएको थियो । तत्कालीन समयमा कभर्ड हल निर्माणका नाममा आयोजन गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रमको जबरजस्ती टिकट लिनुपर्ने बाध्यता चितवनवासीलाई थियो । चितवनका सर्वसाधारणसँग यो लुटको अभियान २०५९ देखि २०६३ सालको अन्तसम्म निरन्तर रुपमा चलेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा संकटकाल भएका कारण जिल्लाका प्रशासकको विरोध गर्न सक्ने आँट कोही कसैसँग नभएका कारण जनताले विरोध गरेकै थिएनन् । कतिपयलाई जिल्लामा कभर्ड हल बन्ने भएपछि त्यति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो होला ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको ९ जनाको कभर्ड हल निर्माण व्यवस्थापन समिति बनेको थियो । जिल्लाका केही सच्चा अनुहारहरु समितिमा देखिएका थिए । कभर्ड हल निर्माण गर्नका लागि उतिबेला असाध्यै खटिनेहरुमध्ये केही अहिले पनि चितवनमा छन् । तर, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जो समितिमा थिए, आज कहाँ पुगेका छन्, थाहा छैन । जिल्लाका नागरिकसँग सहयोग एकातिर उठाइएको थियो भने अर्कोतिर विभिन्न निकायहरुसँग सहयोग चन्दासमेत उठाइएको थियो । कभर्ड हल निर्माणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिविस, भरतपुर र रत्ननगर नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्लाका विभिन्न अस्पतालहरुसँग गरी २९ लाख १ हजार सात सय ६१ रूपैयाँ उठाइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा मध्यक्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्रबाट श्रमदान एवं अन्य निकायहरुबाट वस्तुगत अनुदानसमेत लिइएको थियो । निर्माण कार्य थालिएदेखि निर्माण कार्य छोडिएको अवस्थासम्ममा कुनै पनि निकायले पारदर्शी हिसाबले खर्च सार्वजनिक गर्न सकेन । अहिले निर्माण कार्य बीचैमा छाडी अलपत्र पारिएको ८ वर्ष पुग्दासमेत कभर्ड हलको रकम सार्वजनिक भएको छैन । पछिल्लो पटक हल निर्माणको काम भरतपुर नगरपालिकाले लिएको थियो । त्यही कार्यालयमा पुगेपछि भद्रगोलको अवस्था आएको थियो ।
निर्माण सुरू भएको डेढ वर्षसम्ममा लगभग ४३ लाख रूपैयाँ खर्च भएपछि विवादको सुरूवात भयो । रकम धेरै संकलन भएपछि धेरैको आकर्षण बढ्दै गयो । जिविस, खेलकुद, प्रहरी र भरतपुर नगरपालिकाका बीचमा हानथाप
भयो । अनि, अन्तमा भरतपुर नगरपालिकाले निर्माणको जिम्मा लियो । भद्रगोलको सुरूवात त्यहीँबाट भयो । जिल्ला खेलकुद विकास समिति तथा निर्माण व्यवस्थापन समितिले प्रशासनको दबाबका कारण काम गर्न नसकेको बताएपछि तत्कालीन अवस्थामा सर्वदलीय बैठक बसेर भरतपुर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइएको थियो । जिम्मा लगाएसँगै २४ लाख रूपैयाँसमेत नगरपालिकालाई बुझाइएको थियो । तर, आजसम्म त्यो २४ लाख रूपैयाँको हिसाब कोही कसैले खोजेको छैन । भरतपुर नगरपालिकामा काम गर्ने एक जना महिला कर्मचारीको त्यही कभर्ड हल निर्माणका लागि सहयोग उठाउने नाममा कमजोरी गरेको कारण जागिरसमेत गएको भनिएको थियो । तर, लाखौँ रूपैयाँ अनियमितता गर्ने ठूलाबडाका विषयमा भने कोही कसैले बोल्ने र खोज्ने आँट आजसम्म कसैले गरेन ।
अर्को अचम्मको कुरा २०६३ सालको चैत मसान्तसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कभर्ड हल बनाउनका लागि भनी जिल्लाका नागरिकसँग विभिन्न बहानामा संकलन गरेको ४१ लाख ३ हजार ९ सय रूपैयाँ तत्कालीन अवस्थामा निर्माणको जिम्मा पाएको भरतपुर नगरपालिकामा जम्मा हुन ३१ लाख ९६ हजार ६ सय रूपैयाँमात्र पुगेको थियो । बीचको ११ लाख रूपैयाँ कता हरायो, कसैले समयमा खोजेनन् । धेरै समयपछि एक जनाले अख्तियारमा उजुरी गरेका कारण ११ लाख रूपैयाँ प्रशासनमै भएको जानकारी दिएको भए पनि त्यसपछि त्यो ११ लाख रूपैयाँ कहाँ गयो र कसले खायो, कसैलाई थाहा छैन ।
जिल्लामा रहेको लोखापढी व्यवसायी संघमार्फत मालपोत कार्यालयले जिल्लाका नागरिकसँग ३० रूपैयाँका दरले उठाएको २६ लाख एक हजार रूपैयाँ उठेको काटिएको रिसिभको आधारमा देखिएको थियो । तर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा २० लाख ५८ हजार एक सय २० रूपैयाँ देखाइएको छ । बीचको ६ लाख रूपैयाँको हिसाब कसैले खोजेनन् । कसैले कतै उजुरी नगरेकै कारण त्यो ६ लाख रूपैयाँ लुटिएको छ । सर्वसाधारणसँग ३० रूपैयाँको दरले उठाएको रकम ६ लाख रूपैयाँ सोझै हराउनु लुट हो कि होइन ?
आज त्यही कभर्ड हल विद्युत्को पैसा तिर्न नसक्दा समस्यामा छ । पानीको भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्को तनावमा छ । लाखौँ रूपैयाँ कसले लुटेको छ, थाहा छैन । निर्माणका क्रममा बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि भनी बनाइएको भवन आज एक उद्देश्यमा समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ठूला भुँडी भएकालाई मोटोपन घटाउन बिहान उफ्रने थलो बनेको छ, कभर्ड हल । बल्लबल्ल बनेको झ्यालका चौकोसहरु चोरी भएका छन् । गारो भत्किन थालेको छ । भित्रका संरचना बिगारिएका छन् । वरपर झाडीले घेरिएको छ । चारैतिर फोहोरैफोहोरको अवस्था छ । यसतर्फ किन कसैको ध्यान जाँदैन ?
निर्माणका लागि सुरूसुरूमा उत्साहका साथ सहयोग गर्नेहरु अहिले निराश छन् । त्यही कभर्ड हल जिल्लामा भएका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जिल्लालाई ‘क’ श्रेणीमा राखेको छ । तर, कभर्ड हलको अवस्था त्यस्तो छ । जिल्ला खेलकुदका कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब काटेर एक जना सरसफाइ गर्ने कर्मचारी राखेर कामचलाउ सरसफाइको काम गर्दै आएका छन् । त्यही हरिबिजोग अवस्थामा रहेको कभर्ड हलको दायाँबायाँको बाटोमा दैनिक जिल्लाका ठूलाबडाहरुको आवतजावत हुन्छ, तर कसैलाई चासो छैन, त्यो बेवारिसे कभर्ड हलका विषयमा ।
त्यसैले, समाधानका लागि यो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले जिल्लामा रहेको त्यत्रो संरचना कसको अधीनमा छ ? कसले हेर्ने हो भन्ने विषयमा अन्यौल छ । जिल्ला विकास समितिको जग्गामा हल बनेको छ । हलको विषयमा कसले के गर्ने भन्ने विषयमा कोही बोल्नेवाला छैन । बनेको संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने हो भने तत्कालै एउटा समिति बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को व्यवस्थापनमा आउने गरी संरचना बनाउन सके राम्रो हुनेथियो । हलको मातहतमा रहेको सटरको भाडा कसले उठाएको छ ? बेलाबेलामा हुने कार्यक्रम र दैनिक रुपमा उठाइने शुल्क एउटा कुनै संघले उठाउनुभन्दा पनि हल व्यवस्थापन समितिमार्फत उठाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ । जग्गाको भोगाधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरूरी छ । त्यसैले, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्लाको गहनाका रुपमा रहेको कभर्ड हलको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनको लागि केही पहल होस् भन्ने अपेक्षा छ ।
यदि समयमै ध्यान दिइएन भने पोखराको मणिपाल अस्पतालमा छाना खसेर भएको मानवीय क्षति चितवनको कभर्ड हलमा नहोला भन्ने अवस्था छैन । आमनागरिकले पनि आफ्नो पैसा परेको संरचनाका बारेमा सोधखोज तत्कालैबाट गर्न सुरू गरौँ । कभर्ड हलको व्यवस्थित सदुपयोग गर्नका लागि सबैको चासो बढाऊ । यदि कसैले नयाँ संरचनाका साथ काम अगाडि बढाउँदै छ भने खुलेर सहयोग गरौँ । आफ्नो लगानी र आफ्नो मेहनतबाट बनेको संरचनाको बिजोग टुलुटुलु हेरेर नबसौँ ।
गुञ्जनगर । भरतपुर–१९, पूर्व गुञ्जनगर निवासी वामपन्थी नेता स्व. लीलावल्लभ सुवेदीको ७औँ दिनको पुण्यतिथिको अवसर पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)...